Ukulawulwa kwekhwalithi - iNewwayway Valve Co., Ltd.
Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi ye-NSW
Ama-valve akhiqizwa yiNewsway Valve Company alandela ngokuqinile uhlelo lwe-ISO9001 lokulawula ikhwalithi ukulawula ikhwalithi yama-valve kuyo yonke inqubo ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo iyi-100% efanelekile. Sizohlala sicwaninga abahlinzeki bethu ukuze siqinisekise ukuthi ikhwalithi yezinto zokuqala ziyafaneleka.
Umkhiqizo ngamunye wethu uzoba nomaki wawo wokulandela umkhondo ukuqinisekisa ukulandeleka komkhiqizo.
Yenza Ukudweba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, nokubukeza imidwebo yokucubungula.
Ingxenye yokulawula ikhwalithi:
Ukuhlolwa kwe-1.Visual of castings: Ngemuva kokuphonswa efektri, bheka ngokusobala ukusakazwa ngokuya nge-MSS-SP-55 ejwayelekile bese wenza amarekhodi ukuqinisekisa ukuthi abaphosayo abanazinkinga zekhwalithi ngaphambi kokuthi bafakwe kwisitoreji. Okokuphonswa kwama-valve, sizohlola isheke lokuphatha ukushisa kanye nesisombululo sokwelashwa ngezixazululo ukuqinisekisa ukusebenza kokuphonswa komkhiqizo.
Isivivinyo sobukhulu beValve Wall: Ama-castings angeniswa efektri, i-QC izohlola ubukhulu bodonga lomzimba we-valve, futhi ingafakwa kwisitoreji ngemuva kokufanelekela.
3. Ukuhlaziywa kokusebenza kwempahla eluhlaza: izinto ezingenayo zihlolelwa izakhi zamakhemikhali nezakhiwo zomzimba, futhi kwenziwa amarekhodi, bese kungabekwa ekugcineni ngemuva kokufaneleka.
Ukuhlolwa kwe-NDT (PT, RT, UT, MT, ngokuzithandela ngokuya ngezidingo zamakhasimende)
1.Ukuhlolwa kobukhulu bemishini: Amasheke e-QC futhi aqopha usayizi ophelile ngokusho kwemidwebo yokukhiqiza, futhi angaqhubekela esinyathelweni esilandelayo ngemuva kokuqinisekisa ukuthi iyafaneleka.
2. Ukuhlolwa kokusebenza komkhiqizo: Ngemuva kokuthi umkhiqizo uhlanganisiwe, i-QC izovivinya futhi iqophe ukusebenza komkhiqizo, bese idlulela esinyathelweni esilandelayo ngemuva kokuqinisekisa ukuthi iyafaneleka.
Ukuhlolwa kwesayizi ye-Valve: I-QC izohlola usayizi we-valve ngokuya ngemidwebo yenkontileka, bese idlulela esinyathelweni esilandelayo ngemuva kokuphasa isivivinyo.
4. Isivivinyo sokusebenza kokuvala uphawu kwe-Valve: I-QC yenza ukuhlolwa kwe-hydraulic kanye nokuhlolwa kwengcindezi yomoya ngamandla we-valve, isihlalo sesihlalo, nophawu olungaphezulu ngokuya ngamazinga we-API598.
Ukuhlolwa Kopende: Ngemuva kokuthi i-QC iqinisekise ukuthi yonke imininingwane ifanelekile, upende ungenziwa, futhi upende ophelile ungahlolwa.
Ukuhlolwa Kokupakisha: Qiniseka ukuthi umkhiqizo ubekwe ngokuqinile ebhokisini lamapulangwe elithunyelwa ngaphandle (ibhokisi lepulangwe, ibhokisi elifuthwe ngokhuni), futhi uthathe izinyathelo zokuvimbela umswakama nokusabalalisa.
Ikhwalithi namakhasimende ayisisekelo sokusinda kwenkampani. INewwayway Valve Company izoqhubeka nokuvuselela nokwenza ngcono ikhwalithi yemikhiqizo yethu futhi ihambisane nezwe.